Nezvedu - Primewerks (Xiamen) Maindasitiri uye Trade Co., Ltd.
KHAL | PRIMEWERKS
Kumonyorora & Basket
Isu tinokudzwa kuva nemukana uyu wekugovana newe zvishoma nhoroondo yedu, Primewerks (Xiamen) Indasitiri neTrade Co, Ltd.i bhizinesi rezvekunze-rese, rinotsigira KHAL International (S) Pte Ltd, a Singaporean kambani yakavambwa muna 2005. Kubva panguva iyoyo,
Tave mugadziri Yakarukwa Iron masitepisi zvikamu
Zvigadzirwa zvedu zvekutanga zvinogadzira masitepisi ayo ari maviri anoshanda uye akanaka. Yakagadzirwa simbi balusters, kana shinda, anga ari pakati peanopisa maitiro mune masitepisi dhizaini mumakore gumi apfuura. Iron stair balusters (kana shinda) inogona kuve yakapusa kana yakashongedzwa kwazvo, zvichienderana nemhedzisiro yaunoda. Uye isu tinodada kuenderera nenhaka yekuendesa akakwirira masitepisi zvikamu, zvisingaenzaniswi nevatengi sevhisi kune vatengi vedu.
"Vatengi vanogara vachitanga."
Iyi ndiyo yanga iri dingindira repasi pekubudirira kwaPrimewerks uye kukura. Kubva pakutanga kwekutengeswa kwese kwese kune rako bhizinesi, Primewerks irikushanda nesimba kune imi mese.
Kwemakore, nehunyanzvi hwakasimba hwehunyanzvi, hwepamusoro uye hwakagadzirwa zvigadzirwa, uye yakanakisa sevhisi sisitimu, isu Primewerks takawana kukurumidza kusimudzira, uye indekisi yehunyanzvi uye zvinoshanda zvezvigadzirwa zvedu zvakasimbiswa zvizere uye zvinorumbidzwa neruzhinji rweyazvino misika.
Mune ramangwana, Primewerks ichaenderera ichitamba mukubatsira kwedu, tichigara tichitevedzera gwara re "kutungamira musainzi uye tekinoroji, kushandira musika, kubata vanhu nekuvimbika nekutevera kukwana" uye hunyanzvi hwehukama hwe "zvigadzirwa vacheche", vachigara vachiita hunyanzvi hwetekinoroji, zvishandiso zvekushandisa, hunyanzvi hwekushandira uye manejimendi nzira yekuvandudza, uye kuramba uchigadzira zvigadzirwa zvinodhura kusangana nechinodiwa chekusimudzira mune ramangwana nemisika. Chekupedzisira asi chisiri chidiki, yepamusoro-mhando, yemakwikwi-mutengo zvigadzirwa ndiko kwedu kusinganeti kutsvaga chinangwa!
Anopfuura makore gumi ezviitiko mukugadzira masitepisi zvikamu
Yepamberi yekugadzira nzvimbo
Yakanakisa timu yemhizha kugadzira uye kugadzira zvigadzirwa zvakasarudzika
Professional pane OEM uye R & D mapurojekiti
Kugadzira uye Kugadzirisa
Kugadzira uye dhizaini yemhando yepamusoro masitepisi zvikamu zvinomira zvechinyakare dhizaini, yazvino masitayera, uye yakasarudzika manyorero kusangana nezvinodiwa nevatengi vedu
Yakanaka & isingaenzaniswi vatengi
Yepamusoro mhando zviyero & SOP
Kuchengetedza uye kugadzirwa mukuita
Hofisi Hofisi: +86 (592) 6069078
Nhare mbozha / Whatsapp / Wechat: + 86-13400823290
Kero: Room A-410, No.1647 Xinglinwan Road, Jimei District, Xiamen City, Fujian Province, China